Egwuregwu Laser Cutting Automat Automatic Fabric Laser
Igwe CO2 Laser maka Filter Cloct Industrial Filtration Fabures
Mkpochapu igwe ịkpụgharị ikuku ikuku
Nchikota nke uzo X buru ibu, Y axis laser cutings (trimming) na elu Galvo laser perforating (oghere nke laser). Ezubere ya maka mkpo ahihia mapuct (sock duct, sox duct, soct sox, soct sock), akwa ikuku, soks ikuku, soks ikuku.
Model Mba: JMCCJG-250300LD
Igwe eji akpu ube ahihia CO2 maka teknuzu ocha
Galvo & Gantry Laser engriving igwe maka akwa, akpụkpọ anụ
Usoro laser a na - agwakọta galvanometer na XY gantry. Ndị Galvo na-enye ihe osise dị ọkụ, ịpịgharị ihe, imebi ihe na igbutu ya. XY Gantry na-enye ohere nhazi profaịlụ buru ibu na ngwaahịa buru ibu.
Model Mba: ZJ (3D) -15050LD
Galvo Laser Perforating Cut Machine maka Sandpaper Abrasive Discs
Nnukwu nyocha mpaghara galvanometer. Otutu uzo laser iji bulite uru. Akpaaka nri na ịlaghachi azụ - ebu ...
Igwu laser na-adighi egbu egbu na itughari uzo maka imecha akara. Onye na-agụ koodu QR na-akwado mgbanwe akpaka na elu elu. Ntuziaka weebụ BST na-eme ka ịchọgharị ma na-atụgharị karịa.
LC230 bụ kompeni, kompeni na ngwa igwe laser ngwụcha dijitalụ na obosara weebụ kachasị 230mm Ọ bụ nhọrọ mara mma maka obere ọsọ dijitalụ. Nweputa mgbanwe na oge adighi agha riri onu.
Rieslọ Ọrụ Na-ekpo ọkụ
Anyị na-enye azịza ngwa dabere na teknụzụ laser. Họrọ ụlọ ọrụ gị: ihe ngwọta kachasị laser kachasị mma maka gị
NGWA NGWA INWETA
Mmepe nke ime ụgbọ elu - oche ụgbọ elu
Laser nhazi technology ka nwayọọ nwayọọ matured na na ọtụtụ-eji akpakanamde, ụgbọelu na textiles & ọtụtụ ihe mejupụtara. Usoro laser ga-ewetara gị ọrụ nhazi zuru oke yana uru dị ukwuu.
Nhọrọ kacha mma maka Nka na Mbepu acrylic - Laser Systems
Mpempe akwụkwọ na ịkpụ laser bụ usoro nhazi kachasị mma nke acrylic. Na-enwu gbaa, dị ọcha ma na-enwu gbaa. Ngwakọta dị elu. Kwesịrị ekwesị maka nhazi usoro dị iche iche.
Netiwo ahia uwa